Van Gaal Wuxuu Yiri 'Ma Ordi Karo', Mourinho Wuu Bahdilay, Dadkuna Waxay Yiraahdeen 'Wuu Cayilay' Laakiin Maanta Waa Kaaf & Kala Dheeri | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaVan Gaal Wuxuu Yiri ‘Ma Ordi Karo’, Mourinho Wuu Bahdilay, Dadkuna Waxay Yiraahdeen ‘Wuu Cayilay’ Laakiin Maanta Waa Kaaf & Kala Dheeri
Van Gaal Wuxuu Yiri ‘Ma Ordi Karo’, Mourinho Wuu Bahdilay, Dadkuna Waxay Yiraahdeen ‘Wuu Cayilay’ Laakiin Maanta Waa Kaaf & Kala Dheeri
Luke Shaw wuxuu ku riyaaqayaa kubadiisii ugu fiicneyd ee intii uu joogay Manchester United isagoo u muuqda ciyaaryahan gabi ahaanba iska bedelay midkii ku hoos dhibanaa Louis van Gaal iyo Jose Mourinho.
Waxaa tani cadeyn u ah kulankii ay Man United ka badisay Man City Axadii iyadoo Shaw uu dhaliyay gool cajiib ah islamarkaana uu qaatay abaalmarinta xiddiga garoonka.
Taageerayaasha United waxay la qabsadeen inay arkaan Shaw oo garabka ka soo xaroonaya laakiin ma ahan wax sidaas u badan inuu kubada la soo galo xerada ganaaxa.
Markii ugu danbeysay ee uu sidaan sameeyo waxay aheyd kulankii ay United la ciyaareysay PSV Eindhoven 2015kii markaasoo uu ku ciyaarayay kalsoonida maanta ka muuqata ka hor inta uusan dhaawacin xiddigii PSV Hector Moreno.
Dhaawacaas ayaa keentay inuu labo meel ka jabo lugta midig, mana uusan u dheelin United ilaa iyo xilli ciyaareedkii ku xigay.
Laakiin dhibaatada Luke Shaw waxay soo bilaabatay xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay ee kooxda iyadoo uu la soo wareegay tababare Louis van Gaal sannadkii 2014.
Wuxuu ahaa mid laga niyadjabay xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay isagoo cayilay ka hor xilli ciyaareedka waxaana lagu amray inuu tababar si gooni ah u sameeyo.
Ma aheyn nolol uu filayay xiddig da’ yar oo markii uun ku soo biiray Manchester United.
“Wuxuu u baahan yahay inuu ordo, ma ahan mid leh orod ku filan oo aan u baahanahay” ayuu yiri Van Gaal waqtigaas. “Wuxuu u baahan yahay inuu si gaar ah tababar u sameeyo ilaa iyo uu jir ahaan diyaar ka noqonayo.”
Ciyaaryahan ayaa shaqsi ahaan qirtay inuusan si fiican isagu soo diyaarinin kooxdiisa cusub isagoo markaas ahaa da’ yarka ugu qaalisan dunida.
“Malaha culeys isma saarin ka dib Koobkii Adduunka” ayuu yiri. “Dadku waxay dhahayeen waad cayishay, laakiin anigaa garanaya jirkeyga. Mar walba waxaan muuqdaa mid weyn, waan u dhashay jir weynida, waxaan leeyahay jirka Wayne Rooney oo kale.”
Xilli ciyaareedkii ku xigay wuxuu la kulmay dhaawacii garoomada ka saaray dhowr bilood.
Markii uu taam ahaansho buuxda soo helay, tababarihii la soo saxiixday Louis van Gaal wuxuu ahaa mid baxay iyadoo Mourinho uu bedelay, waxaana Shaw soo maray waqti aad u xun.
Qaab ciyaareedkiisa wuxuu iska ahaa mid iska meel dhexaad ah iyadoo Mourinho uu si xun u bahdilay.
Marka la eego sida uu tababaraha uga hadlayay Shaw saxaafada horteeda, waxaa la isweydiinayay waxa aan la ogeyn ee ka dhacayay daaha gadaashiisa marka ay isla joogaan tababarka iyo qolka labiska.
Shaw wuxuu markaas ahaa 22 jir ka soo laabtay dhaawac soo gabagabeyn karay waayihiisa ciyaareed, wuxuuna wajahay tababare kalsoonidii ka qaaday.
Taageerayaasha United ayaa waqtigaas ku kala qeybsanaa arinta Shaw, kuwa waxay taageerayaan qaabka uu Mourinho u canaanayo Shaw oo aan si fiican u ciyaareynin halka qaar kale ay ku eedeynayeen Mourinho inuu isagu sabab u yahay in Shaw ay kalsoonidii ka lunto.
Haatan taageerayaasha United ayaa dib u eegaya safarkii uu soo maray ciyaaryahanka iyo inuu yahay daafaca bidix ee ugu fiicnaa ee ay heystaan tan iyo Patrice Evra.